Isbedelka Heerarka Beddelka: Tilmaamaha 9-Tallaabo ah ee Kordhinta Heerarka Beddelka | Martech Zone
Suuqgeyaal ahaan, badiyaa waxaan waqti ku qaadnaa soo saarista ololeyaal cusub, laakiin had iyo jeer ma qabanno shaqo wanaagsan oo aan ku eegeyno muraayada isku dayga inaan ku hagaajino ololaheenna hadda iyo howlaheenna internetka. Qaar ka mid ah tani waxay kaliya noqon kartaa inay tahay wax xad dhaaf ah… xaggee ka bilaabeysaa? Ma jiraa hanaan loogu talagalay hagaajinta heerka beddelashada (CRO) Waa hagaag haa… waa jiraa.
Kooxda ciyaarta Khubarada Heerka Beddelka waxay leedahay hanaan CRE u gaar ah oo ay ku wadaagaan bani aadminimo waxay isla dhigeen kooxda KISSmetrics. Faahfaahinta faahfaahinta ayaa ah 9 tallaabo oo lagu beddelayo sicirka beddelaadda
Tallaabooyinka lagu Kordhinayo Qiimaha Beddelka
Go'aami Xeerarka Ciyaarta - horumariyo kanaga Istaraatiijiyadda CRO, yoolalka muddada-dheer, iyo sida aad u cabbiri doonto guusha. Ka bilow martidaada maskaxda kuna soco mid kasta oo ka mid ah talaabooyinka ay tahay inay qaadaan si loogu beddelo macmiil. Ha u maleynin!
Faham Oo Ilaali ilaha taraafikada ee jira - horumariyo aragtida shimbiraha-indhaha ee guryahaaga dhijitaalka ah oo aragtidaada arag iibinta jilitaanka, halka ay booqdayaashu ka imanayaan, bogagga ay soo degayaan ee ay ku soo dhacayaan, iyo sida ay u dhex marayaan bartaada. Aqoonso meelaha leh fursadda ugu weyn ee wax lagu horumarin karo.
Fahmaan booqdayaashaada (qaasatan kuwa aan badalin) - Ha qiyaasin - ogow sababta booqdayaashaadu u baddelayaan iyagoo fahmaya noocyada booqdayaasha iyo ujeedooyinka kala duwan, aqoonsashada arrimaha khibradaha isticmaalaha, iyo uruurinta iyo fahamka diidmada martida.
Baro Suuqaaga - Baro tartamayaashaada, kuwa kula tartamaya, khabiirka warshadaha, iyo waxa macaamiishaadu ka dhahaan warbaahinta bulshada iyo goobaha dib u eegista. Kadib, sahaminta fursadaha lagu hagaajinayo meeleyntaada adoo dhisaya awoodaha aasaasiga ah ee shirkaddaada.
Ku muuji maalka qarsoon ee ganacsigaaga - Aqoonso qaybaha shirkaddaadu ka mid tahay kuwa ugu qancin kara macaamiisha suurtagalka ah, u soo bandhig hantidaas waqtiga saxda ah ee nidaamka wax iibsiga, iyo inaad geliso waqti aad ku hesho, soo ururiso, iyo ku muujiso hantidaas.
Abuur Istaraatiijiyadda Tijaabadaada - Qaado dhammaan fikradaha aad ka abuurtay cilmi-baaristaada oo mudnaanta sii kuwa waaweyn, geesinimada leh, kuwa bartilmaameedka ah ee kobcin doona ganacsigaaga waqtiga ugu yar. Isbeddelada geesinimada leh ayaa ku siinaya faa'iido badan, waxaadna helaysaa dib-u-soo-kabasho ballaadhan.
Naqshadeyso Bogaggaaga Tijaabada ah - Naqshadeynta iyo xarigga siligga ah ee waayo-aragnimada isticmaale ee cusub ee ka dhaadhicin badan, la aamini karo, isla markaana ku habboon-isticmaalka. Ku samee dhowr tijaabooyin adeegsi ah siligga silsiladda oo aad kala hadasho qof kasta oo si buuxda u fahmaya macaamiishaada.
Ku Qaado Tijaabooyin Shabakadaada - Ku samee tijaabooyinka A / B ee tijaabooyinkaaga. Raac nidaam hubiya in dhammaan xubnaha kooxdu fahmaan waxa imtixaanku yahay, sababta aad u socodsiineyso, sida uu ugu habboon yahay goobta, sida ay ula jaanqaadayso yoolalka ganacsiga, iyo sida aad u cabbiri lahayd guusha. Barnaamijka Tijaabinta A / B ayaa xisaabin kara, oo leh saxnaansho tirakoob, nooca noo soo saaraya beddelaad badan.
Ku Wareeji Ololahaaga Guusha Warbaahin Kale - Baadh sida fikradaha ka soo baxa tijaabooyinkaaga guuleysta looga hirgelin karo qeybaha kale ee masafka suuqgeyntaada! Cinwaannada cinwaanada waa la wadaagi karaa, guulaha khadka tooska ah waxaa loo waafajin karaa warbaahinta qadka ka baxsan, waxayna ku faafinayaan erayga la-hawlgalayaashaada si ay kor ugu qaadaan ololahooda.
Ku saabsan Kissmetrics
Kissmetrics waxay u suurta galisaa suuqleyda inay fuliyaan Aaladda Hawlgelinta Macaamiisha (CEA) iyaga oo ka caawinaya inay falanqeeyaan, qeybiyaan, oo ay ka wada qeyb galaan dhammaan hal meel oo ay ku jiraan warbixinno si fudud loo akhriyi karo iyo is-dhexgal adeegsade saaxiibtinimo
Codso Dembi Kissmetrics ah
Tags: Hagaajinta beddelkakhubarada heerka beddelkaheerka sare u-rogiddatillaabooyinka isku hagaajinta heerka beddelaaddaIstaraatijiyad isku-hagaajinta heerka beddelkahabka shaqadafadhiistaraatijiyad crodhunkasho
Apr 17, 2021 at 3: 23 AM
Farriin weyn! Tilmaamaha kor ku xusan ee sagaalka tallaabo ah waa inuu ku siiyaa aasaas aasaas u ah shay kasta oo ka mid ah bogga soo degitaanka, taasoo horseedi doonta beddelaad wanaagsan